Ubbo oo Codsatay in lagu Cadeeyo laxdii ay kufsatay iyo 29 Qiso oo ugub ah oo aad looga naxo oo kale. - Cakaara News
Sida aad horey ula socoteen waxaa jirtay in ururka ubbo uu deeganka ka geystay dhaqamo aad u xun xun oo marnaba bini-aadamka Aduunka ku nool aan suurto gal ka ahayn waxaan tusaale ah ninkii ubbo ahaa ee laxda kufsaday ee ay ka Dawcootay islaantii laxda lahayd ninkaas oo ah sida uu noo sheegtay in uu yahay reer jarareed magaciisuna ahaa Maxamad kaafi oo uu Ubay Karaawil ka sheekayn jiray in uu lax kufsaday haatan gacanta lagu dhigay oo qirtay islamarkaan aad uga sheekeeyey sida uu u kufsadey iyo waxa ku kalifay. Waxaa webka cakaara soo gaadhay codsi laga codsanayo in ay cakaara soo dhigto xogtaas iyo wixii kale ee ay UBO kahayso lagana baahiyo warbahinta oo dhan. hadaba waxaan dadka ugu bishaareyneyna in uu dhamestirmay filimkaas iyo kuwa kale oo sidan u kala horeyni doona.
1 waxaa diyaar ah filiimka ubbo ee 110 maxabuus dadka la horkeeney oo haatan ESTV xayeysiiskiisu uu ka socdo kaasoo la siideyn doono caawa oo isniin ah.
2 filin aad u qaali ah oo aad ku daawan doonto sir culud oo ku saabsan wariyaashii reer sweden oo aad looga yaabi doono cid walba oo daawatana ay cilmi ka baran doonto.
3 filin Googarada, kastuumada iyo kanshaliga ka siibi doona ubbo oo sidhab ah u soo bandhigi doona ceebtii iyo nijaastii lagu yaqaaney ubbo waxan kamid ah
Maxamad kaafi oo ka sheekeynaya sidii u laxda u kufsaday iyo shaqsiyaad kale oo uu sheegay in ay uga horeeyeen oo khibrada iswaydaarsi ahaan (expreince sharing) iyaga ka bartay.
Waxaa kamid ah 189 gabdhood oo ay ubo kufsatay cidii kufsatay iyo gabdhaha magacooda & goobtii lagu kufsaday iyo hogaamintii wax ka ogayd oo cadaynaysa.
Waxaa kale dad aad u badan oo ay ubbo dishay (Uus-Xabaal) oo ay qarin jirtay ayaa waxaa la soo bandhigi cidii dishay oo qiraneysa oo sicad u sheegi doonta cida ku amartay.
Nin ubbo ah oo 13 naagood wada guursaday oo haatan qaba midkastan ay caruur u hayso waliidka gabadha dhaleyna 4 mooyee ayna ogeyn sidoo kale Nin Ubay ah oo Gabadh iyo Hooyadeed laba ilmood ka wada dhalay oo hadana wada jooga isagiina uu ka sheekaynayo caruurtiina ay joogaan sido kale waxaa jira isna nin ubay ah oo isaga iyo seedigii ay hal gabadh ah wada qabeen sidoo kale gabadh ubo ah oo wiil iyo aabihii caruur u wada haysa.
489 caruur ah oo ay haystaan hooyooyinkood oo ilaa iyo haatan aan garaneynin cid dhashay balse filinka ayaa lagu soo bandhigi doonaa cida gabdhahaas kufsatay kadibna dhalay caruurta bilaa abaha ah ama garacda ah.
waxaa kale 29 dhacdo oo aduunka aan wali uga dhicin oo ugub ah ayaad ku dawan doontaa filinkan.